သမီးမိုကျမဖွဈစနေဲ့ ( အရမျးကောငျးလို့ဖတျစခေငျြ) – Youth Bar
သမီးမိုကျမဖွဈစနေဲ့ ( အရမျးကောငျးလို့ဖတျစခေငျြ)
စာဖတျမပငျြးပါနဲ့ ဖတျကွညျ့စေ ခငျြပါတယျ ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆငျးရဲတဲ့ လငျမယား ၂ ယောကျမှာ စာတျောတဲ့ သမီးလေး ရှိတယျ ၊ တဈနေ့ သမီးလေးဟာ အတနျးတငျ စာမေးပှဲမှာ ပထမ ရတယျ ။ အဖဟော ဝမျးသာလှနျး လို့ လိုခငျြတာဝယျပေးမယျ ပွောတယျ ။သမီးလေးဟာ သိပျလိုခငျြခဲ့ပမေဲ့ အဖမှော ပိုကျဆံ မရှိမှနျးသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတျအစား တဈစုံကိုလိုခငျြတယျလို့ ပွောလိုကျ တယျ ။
နောကျတဈနမှေ့ာ အဖဟော သမီးလေး လိုခငျြတဲ့ အဝတျတဈစုံကို ပေးလိုကျ တယျ ၊ သမီးလေးဟာ ဝတျကွညျ့ပွီး မှနျရှမှေ့ာ ပြျောလို့ ၊ အဖေ ကလညျး သမီးလေးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ မကျြရညျ စို့နရှော တယျ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။ညရောကျတော့ အမကေ သူ့ယောကျြားကို မေးတယျ ၊ ပိုကျဆံ ဘယျကရသလဲပေါ့? “ဆေးရုံ တဈခုမှာ ငါ့ သှေးဖောကျရောငျးလိုကျတာတဲ့”
ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တနျးကို ဂုဏျထူး အမြားကွီး ရပွီး အောငျသှားတယျ ၊ ဆေး တက်ကသိုလျ တကျဖို့ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံ မရှိမှနျး သိလို့ မပူဆာ ပါဘူး ၊ တဈပတျ လောကျကွာတော့ အဖကေ ပိုကျဆံတှေ ထညျ့ထားတဲ့ လှယျအိတျကွီး ကို ပွပွီး သမီးမပူနဲ့ ၊ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီးရှိတယျ ၊ သမီး ဆရာဝနျ ဖွဈတဲ့ထိ လုံလောကျ ပါတယျတဲ့ ။သမီးလညျး ဝမျးသာလှနျးလို့ ထ ကနတေယျ ၊ အဖေ ခမြာလညျး သမီးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ ပါးပွငျ ပျေါမှာ မကျြရညျတှနေဲ့ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ
ညကတြော့ အမကေ သူ့ယောကျြားကို မေးတယျ ၊ ဒီ လောကျမြားတဲ့ ပိုကျဆံ ဘယျလိုရလာသလဲပေါ့ “တဈလောက ငါ့ကြောကျကပျ ၂ ခုထဲက တဈခု ကို ရောငျးလိုကျတယျတဲ့”၆ နှဈကွာ သှားပွီး ၊ အပြျောဆုံး နဲ့ ဂုဏျအယူ ရဆုံးနေ့ ၊ သမီးလေး ဆေးကြောငျးအောငျ သှားပွီး ၊ အိမျပွနျလာတော့မယျ ၊ တဲအိမျလေးကို အကောငျးဆုံးပွငျထားတယျ ။အိမျရှမှေ့ာ မွငျးလှညျးတှေ ရပျသံ ကွားရတယျ ၊ လငျမယား နှဈယောကျစလုံး ဝမျးသာအားရ ပွေးထှကျလာတယျ
ဟုတျပါတယျ ၊ သမီးလေး ပွနျလာတာပါ ၊ဒါပမေဲ့ အသကျရှငျလြှကျ မဟုတျပါ ၊ ပိတျဖွူအုပျထား တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပျအလောငျး ။ လာပို့တဲ့ သူတှထေဲက လူကွီး တဈယောကျက ပွော တယျ ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရညျးစားပဈသှားလို့ မနညေ့က အဆိပျသောကျ သတျသသှေားတယျတဲ့ ။စဉျးစားစရာ အတှေးလေးပေးလိုကျပါတယျဗြာ ။ မိမိကို မနှဈသကျ လို့ စှနျ့ခှာ သှားသူ အတှကျ အသကျ ပေးသငျ့ သလား ? မိမိ အတှကျ အနဈနာခံ ခဲ့သူတှေ အတှကျ အသကျပေးဖို့ မသငျ့ ဘူးလား?
စာဖတျသူအပေါငျးကို အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။ စာဖတျသူပရိတျသတျကွီး သဘောကနြှဈသကျခဲ့ရငျ (Share)မြှဝပေေးခဲ့ကွဖို့မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။
သမီးမိုက်မဖြစ်စေနဲ့ ( အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်)
စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ် ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေးဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။ အဖေဟာ ဝမ်းသာလွန်း လို့ လိုချင်တာဝယ်ပေးမယ် ပြောတယ် ။သမီးလေးဟာ သိပ်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေမှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်းသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား တစ်စုံကိုလိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက် တယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာ အဖေဟာ သမီးလေး လိုချင်တဲ့ အဝတ်တစ်စုံကို ပေးလိုက် တယ် ၊ သမီးလေးဟာ ဝတ်ကြည့်ပြီး မှန်ရှေ့မှာ ပျော်လို့ ၊ အဖေ ကလည်း သမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ မျက်ရည် စို့နေရှာ တယ် ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။ညရောက်တော့ အမေက သူ့ယောက်ျားကို မေးတယ် ၊ ပိုက်ဆံ ဘယ်ကရသလဲပေါ့? “ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ငါ့ သွေးဖောက်ရောင်းလိုက်တာတဲ့”
ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး အများကြီး ရပြီး အောင်သွားတယ် ၊ ဆေး တက္ကသိုလ် တက်ဖို့ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်း သိလို့ မပူဆာ ပါဘူး ၊ တစ်ပတ် လောက်ကြာတော့ အဖေက ပိုက်ဆံတွေ ထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်ကြီး ကို ပြပြီး သမီးမပူနဲ့ ၊ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှိတယ် ၊ သမီး ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့ထိ လုံလောက် ပါတယ်တဲ့ ။သမီးလည်း ဝမ်းသာလွန်းလို့ ထ ကနေတယ် ၊ အဖေ ခမျာလည်း သမီးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ ပါးပြင် ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ
ညကျတော့ အမေက သူ့ယောက်ျားကို မေးတယ် ၊ ဒီ လောက်များတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရလာသလဲပေါ့ “တစ်လောက ငါ့ကျောက်ကပ် ၂ ခုထဲက တစ်ခု ကို ရောင်းလိုက်တယ်တဲ့”၆ နှစ်ကြာ သွားပြီး ၊ အပျော်ဆုံး နဲ့ ဂုဏ်အယူ ရဆုံးနေ့ ၊ သမီးလေး ဆေးကျောင်းအောင် သွားပြီး ၊ အိမ်ပြန်လာတော့မယ် ၊ တဲအိမ်လေးကို အကောင်းဆုံးပြင်ထားတယ် ။အိမ်ရှေ့မှာ မြင်းလှည်းတွေ ရပ်သံ ကြားရတယ် ၊ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး ဝမ်းသာအားရ ပြေးထွက်လာတယ်
ဟုတ်ပါတယ် ၊ သမီးလေး ပြန်လာတာပါ ၊ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်လျှက် မဟုတ်ပါ ၊ ပိတ်ဖြူအုပ်ထား တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်း ။ လာပို့တဲ့ သူတွေထဲက လူကြီး တစ်ယောက်က ပြော တယ် ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရည်းစားပစ်သွားလို့ မနေ့ညက အဆိပ်သောက် သတ်သေသွားတယ်တဲ့ ။စဉ်းစားစရာ အတွေးလေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။ မိမိကို မနှစ်သက် လို့ စွန့်ခွာ သွားသူ အတွက် အသက် ပေးသင့် သလား ? မိမိ အတွက် အနစ်နာခံ ခဲ့သူတွေ အတွက် အသက်ပေးဖို့ မသင့် ဘူးလား?
စာဖတ်သူအပေါင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီး သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရင် (Share)မျှဝေပေးခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
သနပျခါးကို တနှဈပတျလုံး မှိုမတကျအောငျလုပျနညျး